Nin hooyadiis u baarrinimo falay oo aad loo amaanay - BBC News Somali
Nin hooyadiis u baarrinimo falay oo aad loo amaanay
Lahaanshaha sawirka WEIBO
Image caption Hooyada Prof Hu oo fasalka ku dhex hurdaysa
Bare wax ka dhiga jaamacad ku taala dalka Shiinaha ayaa hooyadiis oo waayeel ah, islamarkaasna xanuunsan u kaxeeyay fasalkii uu casharka ka bixinayay kadib markii uu waayay qof uu ku dhaafo.
Hooyo la la'aa oo la helay lana xiray
Hooyo qiratay in ay dishay saddex carruur ah oo ay dhashay
Jarmalka oo ganaaxaya waalidiinta aan carruurtooda tallaalin
Haweenaydan ayaa waxa ay qabtaa xanuunka hilmaamka, waxaana dhacday in dadkii kale oo dhan ay wada hilmaamtay, xitaa gabadh walaashiis ah, sidaasi darteedna uu macalinkan isu xilsaaray in uu daryeelo hooyadiis.
Lahaanshaha sawirka SINA WEIBO
Image caption Prof Hu oo cashar bixinaya
Hilmaamkeeda ayaa waxa uu gaaray heer aan xad lahayn, iyada oo aanan xitaa kala garanaynin sokorta iyo oomada, halisna u ah in ay wax kasta ku dhacaan.
Macalinkan ayaa sheegay in hooyadiis mararka qaarkood ay fasalka ku dhex huruddo, mararka kalana ay iska dhagaysato casharada iyada oo xagga dambe fadhida. Waxa uu intaas ku daray in dhaqankeeda fasalkeeda dhexdiisa uu yahay mid aad u wanaagsan oo aanan wax buuq iyo dhibaato ku abuurin ardayda.
Daraasad la sameeyay sanadkii 2010-kii ayaa lagu sheegay in Shiinaha ay ku noolyihiin dadka ugu badan ee la nool xanuunka hilmaamka.
Waxaa kale oo jirta in dadka shiinaha ay sii gaboobayaan, waxaana intaas lagu daray in marka la gaaro sanadka 2030-ka dadka shaqeeya ee Shiinaha ay ka badnaan doonaan dadka gaboobay ee iyaga ku tiirsan.
Baarrinimada waalidka waa qeyb weyn oo muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka Shiinaha. Iyada oo xitaa xilligii boqortooyadii Han dadka dowladda u shaqaynaya lagu xulan jirey hadbo sida ay u kala baarrisanyihiin.
Tirada caruurta ku dhalaneysa Shiinaha oo sare u kacday
Ronaldo oo loo soo bandhigay inuu Shiinaha u wareego
Muuqaal Gabadh Soomaaliyeed oo ay ugu baxdo guurka nin xaasas badan
19 Maajo 2017
16 Jannaayo 2017
Maqal Hooyo Soomaali ah oo korsota canug laga qaatay qoys Soomaaliyeed
24 Luulyo 2017